38 xaafadood oo ku sugan faqooqnaan - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
38 xaafadood oo ku sugan faqooqnaan
La daabacay tisdag 8 december 2015 kl 11.43
Warbixin: Sweden oo ilooday xaafadaha ajaaniibta
Hooyooyin ku dhaqan xaafadda Husby. Sawirle: Kenadid Mohamed/SR
Baaritaan loogu magac darey ”xaafadaha dhaca duleedka magaalooyinka oo uu dalka hooyo ee Sweden illaaway” oo uu xalay ku soo ban-dhigay aqalka kulanka ee xaafadda Husby Jan Edling oo in muddo ah ka howl-geli jiray ururka daladda shaqaalaha ee magaciisa loo soo gaabiyo LO iyo ururka Vinnova ayuu ka muuqday sawir madow ee la xiriira 38 xaafadood oo ey ajaaniibtu ku badan yihiin.
War-bixintan ayuu qoraalkiisa ku soo ban-dhigay Jan Edling in xaafadahaasi ey ka jiraan caqabado ballaaran oo dhan walba leh, hadday noqon lahayd dhanka tacliinta dhallaanka, dhanka hooyga oo uu ciriiri badani ka jiro, dhanka shaqada oo 45 illaa 50 ey shaqa-la’aanu ku haysato bulshada nawaaxiyadaa ku dhaqan, barashada luuqadda iswiidhishka ee qaxootiga dalka ku cusub iyo wixii la mid ah, sida uu sheegay Jan Edling, ahna baarihii war-bixinta.
Saynab Cali waxay ku dhaqnayd xaafadda Husby muddo 18 sannadood gaarsii-san. Iyadoona sheegtay inay ku qanac-san tahay deegaankeeda, marka laga yimaado iney jiraan dhallin-yaro meelaha taagtaagan oo cabsi laga qabi karo. Saynab Cali iyo mar kale: